Xplora X5 Alefaso ny smartwatch ho an'ny ankizy kely | Vaovao momba ny gadget
Xplora X5 Alefaso ny smartwatch ho an'ny ankizy kely
Miguel Hernandez | 02/04/2021 16:00 | Nohavaozina amin'ny 27/03/2021 18:32 | General, hevitra
Teknolojia finday sy marani-tsaina, na finday avo lenta na karazana fitaovana mifandraika, dia zavatra ifandraisan'ny mpikambana tanora indrindra ao amin'ny fianakaviana hatramin'ny nanombohany, na izany aza, mbola misy andiana fitaovana toa ilay wearables izay manolotra fiasa mahaliana amin'ity lafiny ity izay angamba afaka manome toerana kely kokoa isika.
Andeha hojerentsika ny fomba ahafahan'ny X5 Play mandray anjara amin'ny fanomezana fahalalahana sy filaminana ho an'ny ankizy kely ao an-trano, ary ny fomba hanararaotany ny fiasan'izy ireo amin'ny andavanandrom-piainany.
Raha mitranga amin'ny tranga maro hafa dia nanapa-kevitra ny hiaraka amin'ny famakafakana lalina ny horonantsary iray ao amin'ny fantsona YouTube izahay, izay hampianaranay anao amin'ny famoahana boaty mba hahitanao ny votoatin'ny boaty sy ny halaviran'ilay fitaovana , ary koa tutorial kely hanoroanay anao ny fomba ahafahanao manamboatra ny Xplora X5 Play vonona izany rehefa omenao ny ankizy ao an-trano. Araraoty ny fahafahanao misoratra anarana amin'ny fantsona anay ary avelao izahay hametraka fanontaniana ao amin'ny boaty hevitra.
1 Fitaovana sy famolavolana
2 Toetra ara-teknika sy fizakan-tena
3 Fifandraisana sy toerana
4 Goplay: Ataovy mihetsika izy
Fitaovana sy famolavolana
Amin'ny maha-vokatra natao ho an'ny ankizilahy sy zazavavy, dia hitanay fa ny plastika rubbery no tena mampiavaka azy. Ho tsara izany noho ny antony roa, ny voalohany dia ny fisorohana ny ankizy tsy handratra tena aminy, amin'ny fomba anaovany azy io ho vokatra azo tohina. Amin'ny ankapobeny, ny fitaovana dia atolotra amin'ny loko mainty, na dia azontsika atao aza ny misafidy ny lokony miaraka aminy eo anelanelan'ny manga, mavokely sy mainty, ary koa ny antsipiriany kely hafa amin'ny tadin-tsolika ampidiriny ary mora soloina.
Dimensions: X X 48,5 45 15 MG
lanja: Gramin'ny 54
Loko: Mainty, mavokely ary manga
Somary maivana ihany izany ho an'ny zazakely manana lanjany 54 grama fotsiny, na dia toa lehibe aza ny haben'ny boaty sy ny refy ankapobeny. Manana fanamarinana IP68 ihany koa izahay izay hiantoka ny fahafahan'izy ireo milentika azy, manaparitaka azy ary maro hafa tsy misy tahotra ny handrava azy. Mazava ho azy fa ny Xplora sy ny fiantohana azy dia tsy mitandrina ny fahasimban'ny rano, na dia tsy tokony ho olana aza izany.
Toetra ara-teknika sy fizakan-tena
Ao anatin'ity famantaranandro mahaliana ity dia miafina ny processeur Qualcomm 8909W natokana ho an'ny fitafiana, mihazakazaka dikanteny mahazatra an'ny Android ary miaraka amin'ny mety hidirana amin'ny tambajotra 4G sy 3G misaotra ny slot SIM karatra izay tafiditra ao amin'ny fitaovana. Ao anatiny misy trano fitahirizana 4GB, Na dia tsy manana angon-drakitra manokana momba ny RAM aza izahay dia mieritreritra ny amin'ny fanatanterahana ny asany hiasa manodidina ny 1GB. Amin'ity lafiny ity dia tsy nisy fitarainana izahay, araka ny hitanao tamin'ny horonan-tsary.
Haben'ny efijery: 1,4 santimetatra
vahaolana fampisehoana: 240 x 240 teboka
fakan-tsary tafiditra 2MP
Ho an'ny bateria dia manana 800 mAh izahay amin'ny ankapobeny izay hanome andro fampiasana mahazatra raha mampihetsika ny fampiasa fototra isika. Na izany aza, amin'ny alàlan'ny maody mijoro dia afaka manome antsika fampiasana telo andro araka ny fitsapana anay.
Fifandraisana sy toerana
Ny famantaranandro dia manana rafitra GPS mifangaro tohanan'ny fifandraisana data, ho an'ity sy hampiasana ny fampiharana ho an'ny Android sy iOS. Ny toerana misy ny zaza dia haseho amin'ny fotoana tena izy, ary manana ny mety hametrahana aza isika «Faritra azo antoka», faritra voafaritra manokana izay hamoaka fanamarihana amin'ny telefaona rehefa miditra na mandao azy ireo ny mpampiasa.
Ity fizarana ity dia mifandray mivantana amin'ny an'ny fifandraisana, araka ny efa nolazainay, mahaleo tena tanteraka ity famantaranandro ity ary raha manendry azy isika karatra sim Izay manana angona sy miantso fampifanarahana dia hamela anay hifandray amin'ilay kely amin'ny fomba tsotra sy azo antoka. Azontsika atao ny manampy fifandraisana maherin'ny 50 alalana amin'ny alalàn'ny antso an-tariby ataonao amin'ny alàlan'ny antso. Mazava ho azy fa afaka mamaky hafatra an-tsoratra sy emojis manokana amin'ny X5 Play ihany koa isika.
Toa nahomby indrindra ilay fampiharana, mitobaka be ny zava-bita ary ampidirina tsara ao anatin'ny rafitra fiasa samy hafa izy, na dia nahita fampisehoana somary avo kokoa angamba tao amin'ny iOS izahay. Tsy isalasalana fa iray amin'ireo antony lehibe hihazonana ilay fitaovana izy io, satria io no ivon-toerany na dia mahaleo tena aza ny famantaranandro.
Goplay: Ataovy mihetsika izy
Xplora dia ahitana ao anatin'ny taranaka faramparany nijery sehatra hetsika antsoina hoe Goplay. Ity rafitry ny firaketana an-tsoratra sy ny hetsika ity dia nomena tany Eropa, izay manome ny laharam-pahamehana azy noho ny fiaraha-miasa amin'ny Sony PlayStation. Ny kely dia ho afaka hanatanteraka ny fanamby ka hahazo ny valisoa.
Xplora App ho an'ny iOS.
Xplora App ho an'ny Android.
Hanampy azy ireo izany, raha mbola manampy azy ireo eo am-panaovana izany isika ary manaiky ny fandraisana an-tanana azy ireo, hiadiana amin'ny tsy fipetrahana.
Ny tena mahaliana dia ny fisian'ny famantaranandro misy fakan-tsary 2MP, Io dia hahafahan'ny ankizy maka sary mahaliana ary ianao, amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso lavitra, dia maka sary kely ihany koa.
Ny fifehezana ny ray aman-dreny dia manana toerana mibahana ao anatin'ilay rindrambaiko tafiditra ao amin'ilay fitaovana ary tena zava-dehibe izany. Ity famataranandro ity dia manolotra ny ankizy ho fomba fiasa voalohany amin'ny akanjo azo araraotina, amin'ny fomba ahafahan'izy ireo manara-maso tsara ny asan'izy ireo, na amin'ny lafiny fiarovana na amin'ny ady amin'ny fomba fiaina mipetrapetraky ny ankizy, areti-mandringana lehibe amin'ny fotoana mihazakazaka izany. Mazava fa tamin'ny daty, ity X5 Play ity dia napetraka ho vokatra mahaliana indrindra ho an'ny fiarahamonina. amin'ny fiheverana ny sokajin-taona ateraky ny vokatra sy ny fiasa natolotra.
Miresaka ny zava-dehibe izahay izao ny Xplora X5 Play azo vidiana ao tranokala marika manokana avy amin'ny 169,99 euro, vidiny antonony tsara omena ireo fiasa natolotra.
Naoty 4.5 kintana
Famerenana ny: Miguel Hernandez
Navoaka tamin'ny: 2 Aprily 2021
Fanovana farany: Diaben'ny 27 tamin'ny 2021
Fandefasana (habe / lanjany)
Ny fampiharana Xplora dia tena tsara
Nieritreritra tsara ny amin'ny fifehezana ny ray aman-dreny
Somary marokoroko ny habeny
Tsy mora apetraka loatra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Xplora X5 Alefaso ny smartwatch ho an'ny ankizy kely
TCL TS6110, fomba mora hananganana teatra an-trano miaraka amin'i Dolby Audio
HyperX Pulsefire Haste, averinay jerena ity totozy filalaovana ultralight ity